Akụkọ - you ka na-ahọta anya eji acha enyo na gburugburu?
I ka choputara ugogbe anya na ugogbe anya?
Ugogbe anya ugo aghọwo otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'okporo ámá. I ka choputara ugogbe anya na ugogbe anya?
Mgbe ị na-eme njem n'okporo ámá, ihe nchebe anya bụ ugogbe anya maka anwụ. N'oge na-adịbeghị anya, ejiji nke okpokolo agba na-enweghị ntụpọ ka ejiri nwayọ fụọ na ụlọ ọrụ ngwa. Styledị iko ndị a nwere ike ọ bụghị naanị n'ụzọ zuru oke kwekọrọ n'ụdị ejiji ọ bụla, kamakwa ịhapụ gị na nchịkọta kwa ụbọchị. Na-apụtaghị iche, ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka eserese n'okporo ámá iji gosipụta ụdị ya.
Ngwaahịa a na-eji nru ububa nke ihe nru ububa na ihe eji eme ihe na-enweghi nsogbu iji gbakwunye ntakịrị ike na ndụ na-agwụ ike kwa ụbọchị ma dọta uche ndị mmadụ n'ebe ọ bụla.
Mbadamba imi silicone nwere ike belata nrụgide nke imi, na-eme ka ị nwekwuo ahụ iru ala. Okpokolo agba bu metal, ihe nlele bu AC. Enwere agba 7 nke iko ndị a, nke nwere ike ịmakọ uwe ọ bụla masịrị gị.
Sinle cat anya ugogbe anya maka anwụ oge gboo udi ugogbe anya maka anwụ ụmụ nwanyị urukurubụba ugogbe anya maka anwụ,
2020 NEW Abịa Ọbịbịa Obere Ugogbe Anya Igwe Igwe Igwe N'èzí Ejiji Vintage Omenala Kere GIlls Baby Retro Cat Eye Wear INS Cheap, Ezubere nke kacha mma mma iko anwụrụ anya Igwe ọla edo ugogbe anya, Ọkachamara urukurubụba ndo ndị inyom na-acha uhie uhie ugogbe anya maka anwụ, Nnukwu ububa Mara mma ugogbe anya ugogbe ụmụ nwanyị 2018. Cat Anya Red Brown Gradient Mirror Sun Glasses, Oversize Square Slasslasses Women Black Pink Big Frame Sun Glasses Men Okomoko Brand Vintage Retro Eyewear Oculos.